musha South AMERICA FOOTBALL STORies Vanotamba Nhabvu Vanotamba Nicolas Otamendi Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeGenius Inodzivirira Genius inonyatsozivikanwa nezita reZita reNickname; 'The General'. Nhamba yedu Nicolas Otamendi Utano Nhoroondo pamwe neBiography Chokwadi inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri, hukama hwehukama nevakawanda-Vachinyatsoziva zvishoma nezvake pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva nezvekudzivirira kwake kodzero asi vashomanana vanoona Biografia yaNicolas Otamendi iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Nicolas Otamendi Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi akaberekwa musi we 12th waFebruary 1988, muBuenos Aires, Argentina. Ndiye Aquarius nekuzvarwa. Akaberekerwa nevabereki veCarineine Mr naMaria Hernan Otamendi.
Nicolas akakurira muEl Talar, nzvimbo duku muBuenos Aires, Argentina. Akanga ari ane tarenda yakawanda semwana. Kutaura zvazviri, Otamendi akaparadzanisa nguva yake pakati pebhola nebhokisi muhuduku hwake. Achikura, akagovana nguva yake pakati pebhokisi nebhokisi, achivaka simba rake mune zvekuita zvemukati nekomainini vake vasati vasarudza kupa simba rake rose kumutambo wakanaka webhola.
Nicolas akatanga hupenyu hwake hwebhora mukirasi rake reArginine, Velez Sarsfield. Akapedza makore e-12 akapfekedza mavara avo muvechidiki nemapoka makuru. Kare kumashure, aive akajeka muimba yake yehuduku. Kunyangwe paaisimbisa nzvimbo inogara muboka rekutanga, Nicolas achiri kugara kumba nababa vake naamai.
Nicolas Otamendi Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Simuka Mukurumbira
Mushure mekushanda kunoshamisa muChitatu yeNyika yeChina muSouth Africa, akazunungurwa naPorto munaAgasti gore iroro. Mushure memakore maviri akabudirira, kutambira Europa League neTortugal trophies, Valencia yakabhadhara € 2010m ye Otamendi. Sangano reSpain rakarwisana nechikwereti kubva kuCentre, Barcelona uye AC Milan. Man City akaona mukana apo Otamendi akambomira kudzidzisa kana kutamba naValencia. Vakatora pairi uye vakasayina Jenerali ye £ 12 mamiriyoni. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Nicolas Otamendi Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Nicolas Otamendi akaroorwa nehuduku hwake hweArginia. Akambove akaonekwa nemudzimai wake achienda kuresitorendi iri pakati peguta.
Haana kutarisa zvakare kufara mumufananidzo uri pasi apa. Zvichida nokuti Pep Guardiola akamusiya kunze mumutambo unokosha.
Vose vaviri vakaroorana vane mwanakomana anodiwa uyo anotarisa zvikuru sababa vake.
Nicolas Otamendi anozivikanwawo kuva nevamwe vana vane mashoko avo ari kuchengetedzwa.
Nicolas Otamendi Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Military Style
Imwe yezita remutambo waOtamendi ndeyeGeneral, inoremekedzwa kune chinangwa chake chekuita umo anokwazisa vateveri.
Zita rainzi Nicolas Otamendi
Iye anozivikanwa saEl Mohicano. Iri zita rezita rezita rinoratidzira ndebvu dzake.
Nicolas Otamendi Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Iyo ndebvu
Nicolas iye zvino ari kumusoro muhondo yedu ye ndebvu. Imwe Argentine kamwe yakabvuma kuti ndebvu dzake dzinobatsira kumutsidzira mufananidzo wake ane utsinye, wakaoma.
Kunyange zvazvo asina kukanganisa, zvinonzwisisika nguva yakawanda uye simba rinopinda mukugadzira uye kugadzira bvudzi rake chepamusoro, iro, pamwe nechepakati yake yepamusoro pemazuva ano, hazvingamusiyi achitarisa kunze kwenzvimbo.
Nicolas Otamendi- Mambo webhendi
Mumashoko ake.'Ndakatanga kurega ndebvu dzikure kuValencia uye ndakangozvifarira, saka kubvira ipapo, chava chikamu chikuru chehupenyu hwangu. "
Zvechokwadi, ndebvu dzaOtamendi dzinotsanangura maitiro ake akaoma zvakange zvaita kuti pave nezviitiko zvakabudirira mumabasa ake. Muenzaniso webudiriro yakabudirira unoonekwa pasi apa.
Apo bhero rake rinotarisa kumubata
Muenzaniso wekuvepa ndebvu rinowanikwa munyaya inoonekwa pasi apa;
Nicolas Otamendi Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -The Tattoo
Nicolas Otamendi Facts Tattoo
Otamendi aive nemutambo wake wokutanga paaiva 14. Nhasi, ane zvakawanda, imwe neimwe ine zvarinoreva. Mumashoko ake "Mukoma wangu uye my vana, baba vangu, amai vangu, uye pakupedzisira, chiso chekuru vangu vane inked mumuviri wangu. kusvikira dvakadya, Kana ini see design inobata maziso angu, ndichaenda nayo. "
Nicolas Otamendi Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -The Argentine Factor
Otamendi yekuwedzera kuTanchester City team yaireva kuti ive neArgentine kuonekwa seichimbova nyika yakamiririrwa zvikuru muguta reCascade.
Pakati-kumashure yakazova yechitanhatu Argentine kuti inotora nzvimbo yake muItihad yekugadzirisa mukamuri. Akamboratidza kuti vashandi vake Sergio Aguero aiva chimwe chezvinhu zvinokosha mukusarudza kwake kuchinja Valencia kuManchester. Akazivisa kuti: "Kubvira panguva yandakataura naAguero munguva yeCopa America, kufarira kubva kuGuta kwaigara kuchigadzirisa."
Nicolas Otamendi Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Mazuva Okuberekwa Matesi
Otamendi anorondedzera zuva rake rokuberekwa nemamwe maitiro anoratidza kubva kare, kusanganisira Charles Darwin naAbraham Lincoln. Munguva pfupi yapfuura, vatevedzeri Jesse Spencer naJosh Brolin vanodururawo makenduru avo pazuva rimwechete saNicolas.
Nicolas Otamendi Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -The Record Spoiler
Otamendi haina mubvunzo, rekodi spoiler. Pane imwe nguva, Real Madrid yakanga inofarira zvinyorwa zvayo, iyo yakamira pa22 inopinda mumutsara, kusvikira maRiants giants akauya kuzorwa naGeneral, Nicolas Otamendi. Zvanga zviri Cristiano Ronaldo akazarura chikwata, asi Valencia akasunga nesimba kuti aenzanise, uye kwete kwenguva refu mushure mehafu, mukuru we 6ft akakwira kumusoro mumhepo kuti ave nesimba kumusha musoro wake chinangwa.
Izvi zvakagumisa kuguma kweMadrid kukwidzika kunotora kwemwedzi mina.
Nicolas Otamendi Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Nicolas Otamendi anobva kumhuri yakadzika yemhuri yakabatwa nababa vake. Mamiriro avo emamiriro ezvinhu emhuri akakura zvakanyanya sezvo mari yebhora rekurasikirwa yakabhadharwa.
Vose vevabereki vake Mr naMaria Hernan Otamendi vanogara muguta guru reArginia, Buenos Aires. Nicolas Otamendi anorondedzerwa kuva pedyo zvikuru naamai vake.
Nicolas Otamendi Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Idhori Yake
Nicolas Otamandi chifananidzo hachisi mumwe munhu kupfuura Roberto Ayala.
Apo Otamendi akaita dare reAustralia Cup Cup mu2010, akatanga kutanga kugadzira kufananidza nekodzero Roberto Ayala, uyo akaita makore anopfuura zana ekuonekwa kwaLa Albiceleste. The legendary defender (Ayala) akapedza makore manomwe kuValencia pakati pe2000 ne2007. Uyu ndiye uyo akabatsira kunyengetedza mudzidzi wake wechidiki (Nicolas Otamendi) kubatana nechikwata mu2014.
Nicolas Otamendi Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Compression Man
The General anoda kushandisa mabhizinesi ekugadzirisa kuti awedzere mafomu ake uye kugadzirisa kubva kunetseka nekukuvara.
Aya mabhoti akagadzirirwawo kubatsira vatambi kuti vawedzere kushanda uye kuwedzerwa ropa ravo.
Nicolas Otamendi Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -unhu
Nicolas Otamendi ndiye Aquarius nekuzvarwa. Ane unhu hunotevera hunobatanidza unhu hwake.
Nicolas Otamendi's Strength: Iye ari kufambira mberi, chepakutanga, kuzvimirira uye kubatsira vanhu.
Kuneta Kweko Nicolas Otamendi: Anomhanya kubva pakutaura kwepfungwa, kushamwaridzana, kusagadzikana uye kusazvipira.
Chii Nicolas Otamendi anoda: Kufara neshamwari, kubatsira vamwe, kurwisana nezvinokonzera, kukurukura kukurukurirana, muterete akanaka
Chii Nicolas Otamendi asingadi: Kukanganisa, zvivimbiso zvakaputsika, kusurukirwa, mamiriro ezvinhu asina kunaka kana anotsemura, vanhu vasingawirirani navo
Tinoonga nekuverenga yedu Nicolas Otamendi's Childhood Story pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!